Oduu - BBC News Afaan Oromoo
Fuula kan ammaa, Oduu
BBC News, Afaan Oromoo - Oduu
Pirezidant Maakroon qaamoleen hunduu gara dhukaasa dhaabuutti akka dhufan marii Ministira Muummee Abiy Ahimad waliin taasisaniin gaafataniiru. Torbanuma kana ture Ameerikaanis qaamoleen waraana Kaaba Itoophiyaa keessaa harka qaban haal-duree tokko malee, hatattamaan waliigaltee dhukaasa dhaabuurra akka gahaan kan himte.
'Qaamoleen wal-waraanan hatattamaan dhukaasa dhaabanii mariitti seenuu qabu' - US
Wiixata 18/2013 A.L.I, wal’aansi baqaqsanii yaaluu ‘’Itoophiyaa keessatti kana dura tahee hin beeku,’’ jedhame taasifameera.
Seenaa ajaa'ibaa abaaboo Tookiyootti atileetotaaf kennamu duuba jiru
Waltajjii Olompikittii medaaliyaa argachuun hawwii atileetota hundaati. Garuu, olompikii Tookiyoo 2020 baranaarratti abaaboon atileetota injifataniif medaaliyaa biratti kennamu seenaa adda ta'e qaba.
Mallattoowwan weerara Covid marsaa sadaffaa akeekan Itoophiyaatti mul’atan
Itoophiyaatti mallattoon marsaa sadaffaa weerara Covid-19 mul'achu agarsiisan mul'achuu Institiyuutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksise.
Qondaala dhaaba mootummaan federaalaa shororkeessaa jedhee labsee kan tahan Obbo Getaachaw Raddaa waliin suuraa miidiyaa hawaasaa irratti naanna’aa ture irratti kan mul’atan, hojjetaan Sagantaa Nyaataa Addunyaa (WFP) gara biyya biraatti jijjiiraman.
Hamii ispoortiin Haarii Keenii fi Giriiliish gara Maan Siitii, Haalaandi gara Yuunaayitid
Dursaan taphattoota garee biyyaalessaa Ingilaandi Haarii keen Maan Siitii galuuf kilaba isaa Tootenahaam gaafachuuf jedhe, Telegiraam.
Taaliibaan magaaloota gurguddoo marsinaan waraanni biyattiitti cimaa jira
Loltoonni Taalibaan magaaloota gurguddoo kibbaafi lixa Afigaani staaniitti argaman marsu isaaniitti lolli cimaan gaggeefamaa jiraan dhaganame.
Shakkamtoonni Raashiyaa odeeffannoo abbootii alangaa US olaanoo hatan
Hattoonni odeeffannoo kunneenis tarii galmeewwan odeeffannoo cicimoo ta'an qabatan hatuu akka hinoollee sodaatameera.
Dubartoota Chaayinaa bareedinaaf ija guddifatan
Shamarran wal'aansa baqaqsanii yaalamuu bareedinaa kana karaa appii miidiyaalee hawaasaatiin toora qabsiifatu.
Riizoortii Tarkii keessatti balaan abiddaa mudannaan daawwattootni baafamaa jiru
Hoggantuun USAID deeggarsa namoomaa Tigiraay ilaalchisuun Itoophiyaa daawwachuuf
30 Adooleessa 2021
Israa’el Iraan doonii boba’aa geejibu haleelteetti jechuun himatte
Olimpikii Tookiyoo 2020
Solomoon Baaraggaan Olompikii Tookiyootti warqii jalqabaa Itoophiyaaf argamsiise
Itoophiyaan Olompikii irratti fageenya 10,000m'n warqii yoo argattu erga Olompikii Beejingii bara 2008 Atileet Qananiisaa Baqqalaan itti argamsiise as kuni kan duraati
Gabatee medaaliyaawwan Olompikii Tookiyoo 2020tiin biyya kamtu sadarkaa olaanarratti argama?
1 Adooleessa 2021
'Atileetiin lukni qabamnaan fiiguu hin danda'u' - Ogeessa maasaajii
Akkuma leenjisaan, ogeessi fayyaa, kan nyaata qopheessuufi kaanis barbaachisan ogeeyyiin maasaajii dhimmi isaanii hammana hin dubbatamnees gumaachi isaan milkaa’ina atileetiksiif qaban olaanaadha. Ta’us, beekamtii hin arganne jechuun komatu.
Gosoota dorgommii ispoortii 33 olompikii Tookiyoo irratti taasifaman keessaa Itoophiyaan afur irraati hirmaatti. Isaanis atileetiksii, Bishkiliitii, Daaka bishaanii fi Tekuwaandoodha. Dorgommiiwwan kunneen yoom adeemsifamu?
Waa'ee Olimpikii Tokiyoo baranaafi waliigalaan gaaffilee namoonni nuuf dhiyeessan akkasumas wantoota isin beekuu qabdan jennu odeessa kana keessatti qixeessineerra.
Viidiyoo, 'Deeggarsa keenya malee atileetotaaf itti cima', Turtii 2,37
Atileetiksiin addunyaa rikardii Latasanbat Gidey raggaasiseef
Ji'a tokko dura garaagarummaa guyyoota lamaa gidduutti fiigicha fageenya meetira 10,000nin sekondii 15'niin fooyyeessun rikardii haaraan atileetota lamaan galmaa'e. Atileet Siifan Hasaniifi atileet Latasanbat Giddey guyyoota lama keessatti rikardii fageenya meetira 10,000 fooyyeessanis osoo hin ragga'iin turuun har'a ifatti ibsame.
Olimpiikii Tookiyoon dorgomtoonni Afriikaarraa eegaman eenyu fa'i?
Olimpiikii Tookiyoon dorgomtoonni Afriikaarraa eegaman eenyu fa'i? Odeessa haala addaan qixaa'e kanatti dhiyaadhaa
Atileet Solomoon Tufaa dargaggoo gosa ispoortii tekuwaandoodhaan biyya bakka bu'ee Olompikii Tookiyoo Jimaata, har'a, ifatti eegaluurratti ni hirmaata. Atileetiin kuni garuu eenyu?
Olompikiin Tookiyoo 2020 Jimaata dhufu eegaluurratti atileetiksiidhaan atileetonni hirmaataniifi leenjistoonni qophii gahaafi qabxii kana dura ture caalu galmeessuuf qophii ta'u BBC'f himan.
Waraana Tigraay, Itoophiyaa
Mootummaan Itoophiyaa osoo Addi Bilisa Baasaa Ummata Tigiraay (TPLF) 'yakkawwan' gara garaa itti-fufee raawwachaa jiruu argee callisuu filachuun hawaasa addunyaa gaaffii natti ta'aa jira jedhe.
Lola Kaaba Itoophiyaatti Humnootii TPLF kan mootummaan shororkeessaa jedheeniifi mootummaa federaalaa gidduutti ji'oottan sagaliif deemaa ture yeroo ammaa gara Naannolee Amaaraa fi Affaaritti babal'atee jira. Paartiilee siyaasaa biyyattii keessatti socho'an dhimma kanarratti maal jedhu?
Naannoo Amaaraa iddoowwan Tigraay waliin waldaangessanitti adda waraanaa sadi irratti waraanni jajjabaan gaggeeffamaa jiraachuu mootummaan naannoo Amaaraa beeksiseera.
Humnoonni Tigraay kaaba Itoophiyaatti humnoota mootummaa federaalaa fi naannolee biroo wajjin waraanarra jiran, dhukaasa dhaabuuf mootummaan cee'umsaa hundaa'uu akka haaldureetti kaa'an.
Mootummoota Gamtoomaniitti Hogganaan Dhimmoota namoomaa fi Qindeessaa Deeggarsa Yeroo Balaa, Maartiin Giriifiitis dowwannaa guyyoota jahaa Itoophiyaatti taasisan har'a eegalan.
Humnoonni TPLF'n hariiroo qabanii fi milishaan naannoo Tigraay hokkora lammilee Eertiraa Tigraay keessa jiranirraan gahaa jiran akka dhaaban Ameerikaan gaafatte.
Daaniin guddaan Jibutiirraa Finfinnee geessu, akkasumas daandiin baaburaa ulaa galaanaa Jibutiirraa meeshaalee gara Finfinneetti geessu cufachuusaa bulchaan naannoo Somaalee Obbo Musxafee Mohaammad Roohitarsitti himan.
Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa qondaaltoota waaraanaa olaanoo TPLF 74 irratti mootummaa federaalaa humnaan diiguuf yaalu jechuun yakka shororkeessummaan himate.
Konkolaataawwan deeggarsaa 200 ol Samaraa irraa gara Maqaleettii deemaa jiru jedhame
Daangaa naannoo Affaarii fi Tigraayittii lola tureen torban muraasaaf deeggarsi gara naannoo Tigraay adeemu addaan citee turus, har’a konkolaataawwaan Sagantaa Nyaataa Addunyaa gara Maqaleetti socho’uu jalqabuun ibsameera.
Mootummaan naannoo Affaar dargaggoonni hidhatanii finxaaleyyii TPLF akka qolatan gaafate jechuun AFP'n gabaase.
Guyyoota sadan darban lola naannoo Somaalee fi Affaar gidduutti gaggeeffameen namootni 300 olii ajjeefamuu Mootummaan Naannoo Somaalee hime.
Dhaggeeffadhaa, Oduu BBC Afaan Oromoo
Xiyyaarri Dhaabbati Nyaataa Addunyaa Godina Harargee Bahaa Aanaa Kombolchaatti kufuu dhaabbatichi hime.
Manni Murtii Waliigalaa Federaalaa falmii Abbaa Alangaa Waliigalaafi Laamrot Kamaal gidduu jiruratti murtee kennuuf har'atti beellamee turus murtee osoo hin laatin hafeera.
Obbo Jawaar Mahaammad dabalatee himatamtootni galmee isaanii keessatti argaman afur dhimmi isaanii iddoo isaan hin jirretti akka ilaallamu manni murtii ajaje
Marsariitii toora intarneetiin ijaarsa hidha Haaroomsaaf maallaqa walitti qabuuf tolfame Sanbata darbe ifa taasifameen, lammiileen Itoophiyaa biyyoota garaa garaa keessa jiraatan sa'aatii 48 keessatti doolaara kuma 70 ol (birri miliyoona sadii ol) walitti qabuu Humni Elektirikaa Itoophiyaa beeksiise.
Barataan duraanii Yunivarsitii Odaa Bultum kan ture, hanna Yunivarsitii Haramaayaa keessatti raawwateen himatame hidhaan waggaa 15 irratti murtaa'u Yunivarsiitichi BBC'tti hime.
Beenishaangul Gumuuz Godina Matakkal Aanaa Bulanitti namni tokko ajjeefamee, namoota gadda taa'an irratti haleellaa raawwateen namoonni afur miidhamuun himame.
Ogeeyyiin fayyaa hospitaalota riferaalaa Yuunivarsiitii Jimmaafi Asallaa akkasumas hospitaala Booree, waadaan tajaajila wal’aansa Covid-19 irratti mootummaan seeneef otoo hin raawwatin hafuu komatan.
Odeessaalee Covid-19 Hunda ilaali
Qarshii kennaa Covid talaalsisaa jechuun Baayidan waamicha dhiheessan
Pirezidantiin US hojjettoonni federaalaa hundi akka talaalfaman yookiin qoratamuun akka dirqama ta'u ajajaniiru.
Obbo Sisaay Tasfaaye erga kileensaa lamaan hojii dhaabanii waggoota sadiifi baatii afur ta'era. Osoo dhukkubsatee sireerratti hinhafiin duras Daandii QIlleensa Itoophiyaatti mindeeffamun hojjataa ture.
Erga balaliinsii eegalameen booda osoo uffata isaa idileetti deebii'u baate namni isa hubate tokkoo hinturre. Garuu erga inni uffata jijjirateen booda hojjattoonni balaliinsaa gaaffii gaasan.
Dr Teedroos Chaayinaan qorannoo madda Covid irratti akka tumsitu akeekkachiisan
Dureen Dhaabbata Fayyaa Addunyaa (WHO) Dr Teedroos Adihaanom qorannoo madda koronaavaayirasii marsaa lammaffaaf gaggeeffamaa jiru keessatti tumsii fi iftoominni Chaayinaa dirqama ta'uu himan.
16 Adooleessa 2021
Kallattiin - ragaa addunyaarratti namoota Covid-19'n qabamaniifi du'an mul'isu
Guutummaa addunyaarratti lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin irratti argamee miiliyoona 100 ol darbeera.
Dhaabbati Awustiraaliyaa uffata ispoortii hojjetu uffanni isaa tatamsa’ina Covid akka dhaabee fi “balleesse” waan dubbatteef paawondii miiliyoona 2.6 adabame.
Maanguddoon ganna 90 gosa Covid-19 lamaan al takkaatti qabamuun du'an
Maanguddoon Bitootessa 2021’tti Beeljiyeem keessatti lubbuun isaanii darbe kun talaallii hin fudhanne ture.
11 Adooleessa 2021
Murteen 'paaspoortii talaallii EU' attamiin imaltoota Afriikaa miidha?
Waraqaan ragaa dijitaalaa Covid Gamtaa Awurooppaa (EU) biyyoota miseensaa 27 guutuu keessatti Kamiisa kaleessaa irraa kaasee hojiirra ooluu eegale.
2 Adooleessa 2021
Awustiraaliyaatti namoonni qullaa aduu qanqaammatan seera Covid cabsuun adabaman
Awustiraaliyaatti namoonni lama qullaa aduu qanqaammataa wayita jiranitti bineensa daggalaa irra bahee isaan ari'e. Namoonni kunneen sababa weerara Covid-19f labsii sochii dhorkuuf bahe cabsuun ture kan qullaa bahanii aduu qanqaamataa turan.
28 Waxabajjii 2021
Dhaabbati Fayyaa Addunyaa akaakuuwwan Covid qubee Giriikiin moggaase
Akaakuun vaayirasichaa inni jalqaba UK keessatti argame Alpha jedhameera, kan Afriikaa Kibbaa fi Indiyaas moggaafamaniiru.
Jaalala koompiitaraa daa'imummaa hanga haadha qabeenyaa dhaabbata teeknoolojii idil-addunyaa
Daa'imummaan 'kompiitar pirogiraamiing' kan eegalte dhalattuun Itoophiyaa Yoodiit Yasfaayee amma haadha qabeenyaa dhaabbata Teekinoolojii idil-addunyaati.
Dubartii bineensa paarkii keessa jirtu jeeqxe jedhamuun himatamte
Viidiyoon yeroo dubartiin Samantha Dehring jedhamtu bineensa kanaafi ilmoolee ishee lamatti siquun suuraa kaasuuf yoo jettu agarsiisu bal’inaan miidiyaa hawaasaa irratti qoodameera.
Lammiin Itoophiyaa Meroon Hadaroo barreessituu jalqabaa badhaasa kabajamaa 'AKO Caine Prize for African Writing' fudhatte taate.
Biyyoonni Awurooppaa lama kalaqaa beekamaa 'kan kootirratti' atakaaroo keessa galan
Sarbiyaas ta'e Kirooshiyaan Nikoolaa Teslaa akka goota isaanii ta'etti himatu.
Qondaalonni Sirilaankaa akka jedhanitti, dhagaa gati-jabeessi addunyaarratti hunda caalaa guddaa ta’e boroo ykn man-duubee namticha tokkoo keessatti akka tasaatti argame.
Kaardinaallii Kaatolikii Roomaa beekamoon yeroo tokko Pooppi Firaansiisitti dhiyeenya qabaachaa turan maallaqa bataskaana qisaasessuun Vaatikaanitti himataman.
Shamarreen Indiyaa Neha Paswan sababa huccuu fedha ishee filattee uffatteef maatiisheetiin reebamtee ajjeefamte.
Taateen Noorweyitti halkan guyyaa fakkeesse hedduu ajaa'ibsiise
Erga ifni fagoodhaa samiirra mul'atu bakkeewwan Noorway keessa mul'ate booda bosona keessa qubateera.
Kophee kana maaltu gabaarratti jaalatamuun rikardii akka cabsu taasise?
Gaafa Kamisaa oomishaan kophee guddaa ‘Crocs’ gurgurtaa doolaara miiliyoona 640 galchuun baatii sadii keessatti rikardii cabsuu hime. Kan bara darbe yeroo wal fakkaataa irraa dachaan dabaleeras jedheera.
Arjantiinaan namoota saala lameeniin of hin ibsineef waraqaa eenyummaa qopheessite
Arjantiinaan namoota saala lamaaniin of hin ibsineef sirna waraqaa eenyummaa biyyaalessaa haaraa jalqabuu ibsite.
Odeeffannoon baayolojikaalaa fi xiin-sammuu foolii keenya irraa argamu baayyee tahus waan itti fayyadamaa jirru garuu hin fakkaatu.
Waa'ee kaansarii piroosteetii kan dhiiroota qofa galaafatuu maal beektu?
Dhukkubii kaansarii akka addunyaatti lubbuu namaa galaafachuun sadarkaa olaanaarra kan argamu yoo ta’u, walumaagalatti bara 2020tti qofa lubbuu namoota miliyoona 10 ta’u galaafachuu ragaalaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa ni ibsa.
Viidiyoo, ‘Dhamdhamni qurxummii dheedhii addadha’ – Jiraataa Hawaasaa, Turtii 3,03
Foon dheedhii qurxummii nyaachuun magaalaa Hawaasaa keessatti akkaan ho'aa jira. Ogeeyyiin sirna nyaataa garuu of eeggannoon barbaachisa jedhu.
17 Adooleessa 2021
WhatsApp namoonni bilbila malee ergaa akka dabarsan dandeessisuuf
WhatsApp maamiltoonni yeroo jalqabaatiif mala bilbilsaanii malee ergaa akka wal jijjiruu dandeessisan hojiirra oolchuuf yaali jalqabe.
123456 - paaswordiin kee hangam cimaadha?
Lakoofsa akka '123456', 'password123' ykn lakkoofsa bilbilaakee furtuu akkaawuntii itti seentu gootee fayyadamtaa? Akkas taanaa kunoo balaasaafi furmaataaf gorsa qindeessine qabnaati dubbifadhu.
12 Adooleessa 2021
BBC waliin Afaan Ingiliizii baradhaa
As cuqaasuun kutaawwan haaraa torbaniin bahan argadhu, sadarkaan irra jirtu sin murteessu.
Mammaaksa Oromoo guyya guyyaan
Hawaasni Oromoo dubbii ergaa guddoo qabdu dabarfachuufi gabaabsee fixuuf mammaaksatti dhimma baha. Dubbiidhuma kanaafillee mammaaksa qaba - Mammaaksi dubbii fida, ni fixas.
11 Caamsaa 2020
5 Adooleessa 2021
Abbabach Goobanaa, Iddaayyee - jechoota ijoollee isaan guddisaniin
Itoophiyaa keessatti wiirtuun kunuunsa fi guddisa daa'immanii kan jalqabaa akka ta'e himamu kan ijoolleen abbaa fi haadha hin qabne keessatti guddatan Abbabach Goobanaan hundaa'e.
6 Adooleessa 2021